Ngaba kufanelekile ukuba ndiphendule impendulo kwi-Foreclusive ye-NJ yam nangona iintsuku zam ezingama-35 zivukile? - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa koKhuselo kunye namaGqwetha abaGqithisi
ikhaya / Blog / Akuvumelekanga / Ngaba kufanelekile ukuba ndiphendule impendulo kwi-Foreclusive ye-NJ yam nangona iintsuku zam ezingama-35 zivukile?
January 2, 2020 Akuvumelekanga, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoI-Veer Patel
Le nkampani iqine umthetho wokukhusela ukubonwa kwangaphambili eNew York naseNew York. Umbuzo wanamhlanje uthi: "Ukuba ndingafakela impendulo nangona iintsuku zam ezingama-35 zikwityala lokuchazwa kweNew York."
Njengazo zonke iimpendulo zomthetho impendulo ithi, “Mhlawumbi.” Amaxesha amaninzi sinokuthi, “Ewe. Kufanelekile. ”Isizathu sokungafaki mpendulo zihlala zihambelana nezikhuselo ezinokuthi ziphakanyiswe, okanye nokuba ufuna impendulo mpela na. Sinabaqashi beze kuthi beze kubuza ukuba bafuna ukufaka ifayile nkundla na, kwaye sele sifumene umqeshi owayenesizathu sokufaka ifayile.
Yintoni emisa impendulo kwi-Foreclusive ye-NJ ifakwa efayilini emva kweentsuku ezingama-35?
Eyona nto ikunqumayo ekugcwaliseni impendulo emva kweentsuku ezingama-35 ayiloxesha leentsuku ezingama-XNUMX; sisicelo esichasene nengcebiso yokukufumana usilele. Ukufayila yeyona nto ilawula ngokufayilisha kwempendulo. Nangona kunjalo, nokuba sele usilele, kusenokwenzeka fayile impendulo emva kwexesha kokuba ukishiyiwe.
Njengomzekelo, masithi emva kokuba iintsuku ezingama-35 zivukile, ngoku lusuku olu-45 mhlawumbi wawunjalo okanye wawungekho kwinkqubo yokuLumkisa ngeNew York. (Oku kwahlukile kuno a ingqungquthela yolawulo lwamatyala angachazwanga.) Nangona kunjalo igqwetha lebhanki aligcinanga ukwenza ifayile. Ukuba ufaka impendulo inkundla iya kuyamkela ngokungathi igcinwe ngexesha. Ndikwenzile oku izihlandlo ezininzi xa abathengi bengazange bandiqeshe de emva kokuphela kweentsuku ezingama-35.
Zithini izizathu zokuba igqwetha lebhanki lingavumeli umntu ukuba angafihli umntu endaweni yokuboniswa kwe-NJ?
Ngamanye amaxesha kubakho unxibelelwano Umcimbi ophakathi kwebhanki kunye namagqwetha abo. Ngamanye amaxesha unokuba nesivumelwano kunye negqwetha lebhanki, njengoko ubucele iintsuku ezingama-45 ukuya Thengisa ikhaya lakho ngelixa likuQhubeka, okanye uyi ukusebenza okanye kuvunyiwe ukuguqulwa kwemali mboleko kwaye bavuma ukuba bangaqhubeki phambili. Ngamanye amaxesha imeko isenokuba kumacala okumangalela okuthetha ukuba abameli abanakuqhubeka nokubona kwakho. Ngamanye amaxesha abameli bebhanki bayiphosa ngokugcwalisa le fayile ngokukhawuleza njengoko kunokwenzeka , kwaqeshwa isiluleko esitsha…. Uluhlu luyaqhubeka kwaye kutheni kutheni ukugcwalisa kusenokungazange kwenziwe kwakamsinya nje ukuba kwenziwe.
Kuyo yonke le mizekelo, oku kunika ithuba njengommangalelwa ukuba afake impendulo, nokuba sele ziphelile iintsuku ezingama-35. Ke, hlala ukhumbula, kuba ithi kwiintsuku ezingama-35 kwiisamani zakho zembonakalo kunye nesikhalazo usengafaka impendulo kwityala lakho lembonakalo entsha yaseJersey ukuba awukhange ugcinwe. Amaxesha amaninzi xa imali ikumgca webhanki, ukufayilisha okokungaphumeleli emva kweentsuku ezingama-35 kuyinto ephambili. Siye sabaxhamli beenkonzo eziphantse zafikelela kwinqanaba lokuba apho kuthengiswa amakhaya kukhutshwe phantse iinyanga ezi-4 emva kokuba kuqalile ukubhengezwa bengakhange balwe. Ke, sukukholelwa nakubani na othi uneminyaka yobudala bokubonisa.
Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha amagqwetha ebhanki awafaki ngokukhawuleza njengoko kufanelekile ukuba asebenze kuwe. Ke impendulo kumbuzo: "Ngaba kufanelekile ukuba ndiphendule impendulo kwi-Foreclusive ye-NJ yam nangona iintsuku zam ezingama-35 zisemva?"
Nokuba awuyongumnini ekubekweni ngaphambili njenge umgwebi okanye, umqeshi kwaye unemibuzo uzive ukhululekile ukubiza a NJ igqwetha lezomthetho ukuphuhlisa isicwangciso sokugcina ikhaya lakho okanye uhambe ngeendlela zokuthengisa ikhaya lakho okanye yakha ityala lakho emva kokubhencwa, okanye xoxa ngayo nayiphi na imicimbi yezomthetho onokuba unayo. Umnxeba 973-200-1111 okanye i-imeyile [Imeyile ikhuselwe]
Ukuchongwa kwangaphambili - iWW yegqwetha lakho